PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-18 - Abokufika neqhaza ekubozeni kwelakuleli
Abokufika neqhaza ekubozeni kwelakuleli
bangaphandle ukuvikela abomsinsi.
ISpain, Germany ne-Italy, kuphela emazweni ase-Europe amaqembu esizwe agcwele abadlali abadlala ekhaya nokwenza ehlale njalo edlala kangcono kwi-World Cup.
Sono, ophinde abe ngusihlalo nomqeqeshi weJomo Cosmos, uthe ubengahambisani nobekwenziwa yi-Uefa yokuvumela amaqembu adlala kumaligi akhona asebenzise abadlali bangaphandle noma ngaba yisibalo esingakanani. “Ngiyajabula ngoba isigcine ukuthi
iFA ibonile abadlali
bangaphandle bancisha amathuba okudlala abendabuko. Bekungawenzi umqondo ukubona iLiverpool idlala ngabokuhamba bodwa ngisho abokuchibiyela kuhlezi bona bodwa ebhentshini,” kuchaza uSono owake waba ngumqeqeshi weBafana Bafana.
“Ukwehlisa isibalo kuzolisiza kakhulu iqembu lesizwe lakhona esikhathini esizayo.
Amanye amazwe angomakhelwane beNingizimu Afrika okunabadlali bawo kwiligi yakuleli yiNamibia, Zambia, Botswana ne-Uganda. Emidlalweni yokuhlungela i-Afcon kucacila ukuthi iqembu laseZimbabwe liqinile ngenxa yokuthi iningi labadlali bayo lidlala kwiPSL.
Njengamanje iZimbabwe iqhwakele phezulu eqoqweni layo eliwu-G ngamaphuzu ayisishiyagalombili, ilandelwe uthi: “Nathi sesibhekene nesimo se-England. Uma uthula ubheka wonke amazwe anabdlali abadlala kwiPSL adlala kahle yiDRC ngamahlanu.
UMandla Ncikazi, oyiphini lomqeqeshi kwiLamontville Golden Arrows
emidlalweni ye-Afcon.Inkinga esibhekene nayo njengabaqeqeshi wukuthi abadlali abaqhamuka emazweni angomakhelwane, bakhuthele bayazi ukuthi bezeleni lapha ekubeni abomsinsi bahudula izinyawo. Ngakho uma ungumqeqeshi ngeke ukwazi ukubaziba uma usubophela isikimu.”
Abadlali baseZimbabwe okubunjwe ngabo iqembu lakuleliya zwe lakwaMzilikazi ngoGeorge Chigova noTalent Chawapiwa (Polokwane City), Danny Phiri (Golden Arrows), Ovidy Karuru (AmaZulu), Khama Billiat noTeenage Hadebe (Kaizer Chiefs), Munetsi Orlando
Abadlali bamanye amazwe abadlala kwiPSL kukhona uDenis Onyango, okuthe ngokudlala eNingizimu Afrika wasiza izwelakhe ngokuthi lingene kwiNdebe ye-Afcon, eGabon ngo2017.
Ngaphandle kukaOnyango kubadlali base-Uganda kuphinde kube Godfrey “Wazza” Walusimbi odlalela iChiefs no-Allan Kataregga yena ogijima kwiCapeTown City.
IZambia neNamibia nabo babonakala bengenisa mawala kwiPSL.
Kubadlali beChipolopolo kukhona uKennedy Mweene okwiMamelodi Sundowns, Justin Shonga, no-Augustine Mulenga abagijima kwi-Orlando Pirates.
UKenny Ndlazi oke waqeqesha iqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kuka-23 yena, uthe nakuba sekugcwele abadlali basemazweni angomakhelwane emaqenjini ePSL kodwa nendlela okuqokwa ngayo abadlali ayibenzi ubulungiswa.
“Bheka nje, umdlalo ofana noMothiba (Lebohang), akekho obemazi ngoba akazange adlale ezigabeni zebhola lakuleli.
“Ngaleyo ndlela iSafa kufanele izibuze umbuzo wokuthi, bangaki abadlali engabazi abadlala emazweni aphesheya kwezilwandle ngoba akadlalanga ezinhlakeni zayo,” kusho uNdlazi.
Ngaphandle kweZimbabwe, amanye amazwe adlala kahle emdlalweni yokuhlunga okunabdlali abagijima emaqenjini ePSL yiNamibia, Zambia ne-Uganda.
INamibia neZambia baboshelwe bonke kwiGroup K okuqhwakele kuyona iGuinea-Bissau ngamaphuzu ayisikhombisa. Ngemuva kwayo kukhona iNamibia ngamahlanu, kube yiMozambique neZambia ngamane ngokulandelana kwabo.
Chiefs umdlali waseMadagascar ezibekele okukuqala kweyamanqamu emlandweni we-Afcon, kuzovula esinye isibhobo kubadlali baleliya zwe ukuthi nabo bathutheleke ngobuningi eNingizimu Afrika.
UManqoba Mngqithi oyiphini lomqeqeshi kwiSundowns, uthi phezu kokuthi abadlali bangaphandle bethola ukukhuphula izinga kwiPSL kodwa nendlela okuqokwa ngayo abadlali kwiBafana ayanele.
“Ngibona nathi singababheki abadlali bamanye amaqembu. Uma siqoka abadlali sibheka emaqenjini amane kuphela adlala kwiPSL.
“Kufanele amehlo ethu kesiwenabisele nakwamanye amaqembu. Bakhona abadlali abangcono kodwa abangagqamile ngenxa yokudlala emaqenjini angadumile,” kubeka uMngqithi.